Qorannoon sanyii mishingaa fooyyeessuu gaggeeffamaa jira – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Qorannoon sanyii mishingaa fooyyeessuu gaggeeffamaa jira
On Jan 13, 2020 48
Finfinnee, Amajjii 4, 2012 (FBC) – Qorannoon sanyii mishingaa fooyyeessuu deeggarsa Minsiteera Innooveeshinii fi Teeknooloojiin naannoo Yuunvarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Finfinneettii gaggeeffamaa jira.
Qorannoon gaggeeffamaa jiru kun mishingaan yeroo tokko faca’e giddugaleessan waggaa 5 hanga 7 osoo irra deebiin hin qotaminii fi hin faca’in waggaatti sa’a 2-3 oomisha kennuu akka danda’uuf hojjetamaa jira jedhameera.
Hektaara tokkotti callaa kuntaala 60 hanga 70 laachuu akka danda’u ibsameera.
Deeggarsa ministeerichi taasiiseen kana dura iddoolee lamatti yaalii godhameen bu’aa gaarii argamsiisuu isaa himameera.
Yuunvarsiitii Saayinsii fi Teeknoolloojii Finfinneetti Mishingaan baatii Waxabajjii bara 2011 faca’e yeroo 3f oomisha laachuu danda’eera.
Oomishni kunis hoggantoota innooveeshinii fi teeknooloojiin daawwatamuu isaa ragaan ministericharraa argame ni mul’isa.
Ityoophiyaatti waliigalteen galmee jechoota seeraa jalqabaa qopheesisuu danda’u…
Feesbuukiin magaalaa guddaa Naayjeeriyaatti waajjira isaa banufi
Irreechi Hora Finfinnee kaartaa argate
Kilabiin sababa vaayrasii koroonaaf jecha walirraa fageenya eegee taphate goolii…
Ityoophiyaatti waliigalteen galmee jechoota seeraa jalqabaa…
Feesbuukiin magaalaa guddaa Naayjeeriyaatti waajjira isaa…